Enchantment - WoW Guides | WoW Guides
Mahagaga zavatra majika sarobidy mampatahotra ary ampiasao ny ambiny majika hampitomboana ny herin'ny fiadianay.
Zandalari sy Kul Tiran Enchanting Guide - Avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 150
Aloha! Amin'ity torolàlana ho an'ny Zandalari Enchantment sy Kul ity dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny handeha amin'ny làlana ...
Enchantment amin'ny ady ho an'i Azeroth
Salama daholo. Miaraha aminao indray raha mila fanavaozam-baovao momba ny asa Enchanting ao Battle for Azeroth….
Torolàlana manintona 1-800
Aloha! Amin'ity Torolàlana Enchanting ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianarinay anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra ...
Torolàlana mahafinaritra ao amin'ny Legiona - Raiso ny fomba fahandro rehetra
Aloha! Enchantment in Legion toy ny sisa amin'ireo asa dia novaina tamin'ny lafiny maro. Ao amin'ity…
Asa fitoriana manintona any Legion
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Misiona manintona ao Legion. Amin'ity toro-lalana ity izahay dia mitondra anao ny iraka rehetra sy ...
Torolàlana momba ny fitaovam-piadiana amin'ny fitaovam-piadiana
Aloha! Androany aho mitondra anao ny torolàlana momba ny fiheverana fitaovam-piadiana ho an'ny fiovan-tarehy ao Legiona, sokajina amin'ny loko sy ny endrik'i ...
Torolàlana mahafinaritra ao amin'ny Warlords of Draenor
ny Dani tortosa hace 8 taona .
Tongasoa eto amin'ny torolàlana momba ny Warlords of Draenor izay hanampy anao hahatratra ny ambaratonga 700 ...
Torolàlana manintona 1-600
Ity dia torolàlana amin'ny antsipiriany momba ny fananganana mora foana ny fitateranao amin'ny 1 ka hatramin'ny 600 ao amin'ny Mists of Pandaria. Ity torolàlana ity dia feno fa misy kosa ny mpilalao sasany izay tsy maintsy mividy fitaovana fanampiny rehefa tsy mahazo ny tebon'ny zavatra mavo. Ny mpilalao sasany dia mety mahita zavatra samihafa izay mora kokoa ho azy ireo amin'ny mpizara azy arakaraka ny toekarena fa mety tsy hamerina ny volamenanao ireo. Raha miakatra amin'ny 1 ka hatramin'ny 600 ianao dia tokony hanana volamena 25,000. (Fanamarihana: Afaka mahazo manodidina ny 20,000 XNUMXg na mahery ianao amin'ny fivarotana ny Enchanted Vellums amin'ny lavanty.
Torolàlana manintona 1-525
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Asa mahafinaritra amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Enchanting dia iray amin'ny asa mahomby indrindra amin'ny World of Warcraft, nefa izy io koa dia iray amin'ireo lafo indrindra. Ny mpilalao dia mila famosaviana foana amin'ireo fitaovana ampiasainy izay miova matetika ka, miaraka amin'ny vellum sasany, afaka manao volamena isika.
Asa asa matetika ampiarahina aminy Fivarotana mpanjaitra Satria tsy mila fanangonana izany, satria ireo zavatra vita amin'ny Tailoring dia mety hanelingelina anao.
Torolàlana Enchanting 450-525
ny Kamatayan hace 11 taona .
Ity iray ity Torolàlana manintona mampiseho anao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny asanao Enchanting avy amin'ny haavo 450 ka hatramin'ny 525. Raha mbola tsy nahatratra an'ity ambaratonga ity ianao dia tsidiho ary ankafizo ny Torolàlana mahasarika 1 ka hatramin'ny 450 alohan'ny hahatongavan'ny Cataclysm. Amin'ity torolàlana ity dia tsy hampiasa afa-tsy fitaovana izay azontsika ampiasaina amin'ny fampiasana ny fahafahantsika manamboatra zavatra manala baraka isika.
Hanombohana ny mpitari-dalana anay, miankina amin'ny zava-misy fa efa anananao ny a Rodin'ny Titanium.
Torolàlana ho an'ny disenchantment
ny Wow mpitari-dalana hace 13 taona .
Ity iray ity Torolàlana ho an'ny disenchantment Natao hanampiana anao hampisondrotra ny fahaizanao manintona sy hahazoana entana ho an'ny asa izany. Ny lisitra eto ambany dia mampiseho anao ny fampahalalana ilainao. Azonao atao ny manaraka ny anay Torolàlana manintona hiakatra haingana.
Ny karazany sy ny habetsaky ny fitaovana azontsika amin'ny fotoana tsy fahafantarana azy dia miovaova arakaraka ny karazany ny zavatra (fiadiana na fitaovam-piadiana), ny haavon'ny zavatra sy ny kalitaony. Misy fitsipika ankapobeny azontsika arahana:
El vovoka hitantsika ara-dalàna ao izy io fiadiany (75%) ary Armas (20%)
ny Essences afaka mahita azy ireo ao isika Armas (75%) ary fiadiany (20%)
ny sombina afaka mahita azy ireo ao isika fitaovana manga (97-100%), epic fitaovana (100%, 2-4x), ary mahalana amin'ny fitaovana maitso (3-5%)
ny Cristales ho hitantsika izy ireo amin'ny fitaovana epika ary indraindray tsy dia fahita firy amin'ny fitaovana manga (~ 0.5%)
Torolàlana manintona 1-450